काखे छोरी माइतीमा छाडेर कोरोना अस्प`तालको नेतृ`त्व गर्दै डा शान्ति !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/काखे छोरी माइतीमा छाडेर कोरोना अस्प`तालको नेतृ`त्व गर्दै डा शान्ति !!!
नारायण अधिकारी – दुई बाल`बालिका माइ`तीमा छाडेर डा शान्ति भुर्तेल नेपालले यतिबेला भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । भरतपुर अस्पताल मातहतमा कोरोना अस्पताल आएपछि वैशाख १० गतेबाट सो अस्पता`लको प्रमुख उहाँलाई तोकिएको छ ।
कपिलव`स्तुको वाणगङ्गा स्थायी घर भएकी डा शान्तिको माइती भरतपुरमै छ । माइतीमा तीन वर्षीया छोरी आरभी र नौ वर्षीय छोरा आरभलाई राखेर उहाँ भने कोरोना अस्पतालमा खटिरहनु`भएको छ । सासु–ससुराको निधनपछि श्रीमान् डा धिरेन्द्र नेपालको गत वर्ष निधन भएसँगै परिवार आफैँले सम्हाल्दै आउनुभएकी डा शान्ति परिवारको व्यवस्थापनसँगै आफ्नो जिम्मेवा`रीमा खटिर`हनुभएको छ ।
कोरोना अस्पता`लमा केही दिनयता स्वाब सङ्कलन गर्न छाडे पनि त्यहाँ रहेका चार सङ्क्रमितको चौबीसै घण्टाको व्यवस्थापन उहाँको थाप्लोमा छ । उनीहरुको खानपानदेखि स्वास्थ्योपचार मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत २७ कर्मचारीको खान`पान र बसोबा`सको व्यवस्था`पन उहाँ आफैँले गर्दै आउनुभएको छ ।
उच्च जोखिममा काम गर्नुपर्ने भए पनि सङ्क्रमित निको पार्न र सङ्क्रमण सार्नबाट रोक्न उहाँको व्यवस्थापन प्रभावकारी देखिन्छ । दैनिक सङ्क्रमितसँग टेलिफोन र भिडियोकलबाट उनीहरुको अवस्था उहाँले बु`झ्ने गर्नुहुन्छ । कुनै स`मस्या भएमा तत्काल समाधान गर्ने उहाँको दैनिकीमा पर्दछ । उहाँले भन्नुभयो, “दिउँसो त म अस्पतालमै हुन्छु, साँझ–बिहान जतिबेला समस्या पर्छ त्यतिबेला यहाँ आउँछु ।”
खाना देखि औषधि सम्मको चाँजो`पाँजो आफँैले मिलाउनुपर्ने भएकाले चौबीसै घण्टा ध्यान अस्प`तालमा नै हुने उहाँले बताउनुभयो । डा शान्ति बिरामी थपिँदै गर्दा अस्पतालमा गर्ने व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा यतिबेला जुटिरहनुभएको छ । “गुनासो कसैको नआउने गरी व्यव`स्थापनमा जुटेको छु”, उहाँले भन्नुभयो “सङ्क्र`मितलाई सके सम्म छिटो सङ्क्रमणमुक्त भएर फर्काउन सकियोस् भन्ने चाहना छ ।”
सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने स्वा`स्थ्यकर्मी र चिकि`त्सकलाई वि`श्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिका अनुसार काम गराउन उहाँ तल्लीन हुनुहुन्छ । जसका कारण सङ्क्रमण उनीहरुलाई नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ अस्पतालमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नेतृत्व गरेपछि अस्पतालले झण्डै ६०० जनालाई सेवा दिइसकेको छ । अस्पतालको नेतृत्व गरिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी होटलको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् भने उहाँ अस्पतालकै आवासको क्वारेन्टिनमा बस्दै आउनुभएको थियो । दुई दिनअघि स्वाब परीक्षण गरी अहिले रातको समयमा छोराछोरीसँगै माइतमा बस्दै आउनुभएको छ ।